Warqad Cilmi baaris ah oo lagu iibinayo Somalia
Ma u baahan tahay caawimaad qoris xirfadeed? Ka hel warqad tayo sare leh Warqadda Cilmi-baarista ee ugu Wanaagsan ee iibinta Somalia ku qoran dhammaan heerarka tacliimeed.
Warqad Cilmi baaris ah oo Iib ah - Maxaad ugu iibsaneysaa warqaddaada internetka
Waxaa laga yaabaa inay duufsan tahay inaad iska indhatirto amarka warqadda cilmi baarista ee iibinta ah waqti lumis. Si kastaba ha noqotee, haddii aadan awoodin inaad dhammaystirto hawsha nafsaddaada, waxaa laga yaabaa inaad isku aragto xaalad aad waqti yar u haysato inaad ku qabato hawlo kale haddana, waxaad u baahan tahay inaad ku dhammaystirto hawsha wadada degdegga ah. Nasiib wanaag, waxaa jira dhowr shirkadood oo kala duwan oo bixiya adeeggan si ay kuu caawiyaan.
Adeegyada qorista waraaqaha ayaa ah shaqooyinka ugu xanaaqa badan ee badanaa iyadoo aan loo eegin inta jeer ee ay tahay tobnaadkaaga midkaaga ah, weligood wax dhib ah kama yaraanayaan. Qoritaanka waraaqaha cilmi baarista waa shaqo aad u baahan tahay inaad noqoto mid taxaddar leh oo si faahfaahsan u jahaysan. Haddii aadan awoodin inaad dhammaystirto hawsha nafsaddaada, markaa waad iska saari kartaa cadaadiska mashruuca adiga oo kuu sameeya si kasta oo aad doorato. Xaqiiqda ah in warqadda horeyba looguugu qoray waa dhibic yar, in kastoo tani ay tahay tixgelin weyn markii aad tixgeliso inaadan khabiir ku ahayn qaybta gaarka ah ee warqadda cilmi baarista ee aad qoreyso.
Waa inaad had iyo jeer xasuusnaataa ka hor intaadan dalban internetka, waa inaad marka hore la fariisataa qalin iyo warqad aad ku qorto sida saxda ah shuruudahaagu. Tani waxay ku siin doontaa fikrad wanaagsan nooca warqad cilmi baaris ah oo aad rabto inaad iibsato. Waxaa jira dhowr nooc oo waraaqo cilmi baaris ah, sidaa darteed waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso nooc gaar ah oo warqad ah.
Marka hore, hubi inaad go’aansato inaad u baahan tahay qormo ama warbixin. Qormooyinku waxay qaadan doonaan shaqo badan iyo fiiro gaar ah sidaa darteed waa inaad hubisaa inaad awood u leedahay inaad si dhakhso leh ku dhammayso, xitaa haddii ay tahay tobnaad. Haddii aadan aqoon u lahayn aagga la baarayo, markaa waa inaad heshaa adeeg kaa caawin kara tan.
Marka labaad, go'aanso nooca warqad ee aad u baahan tahay. Qoraalku wuxuu u baahan karaa inaad sameyso cilmi-baaris dheeraad ah, laakiin waxaad u baahan kartaa inaad ku darto xaqiiqooyin ka badan intaad warbixin uga baahnaan lahayd. Warbixin ayaa laga yaabaa inay kaaga baahan tahay inaad u siiso iyaga cilmi-baarista iyaga loogu talagalay, laakiin waxaad u baahan doontaa inaad ku baarto mowduucooda kaligaa oo aad siiso macluumaadka asalka lagama maarmaanka ah.
Mar saddexaad, iska hubi inaad miisaaniyad ugu leedahay amarkaaga. Tani waxay xaqiijineysaa inaad si sax ah u ogaatid intaad qarashgareyn karto iyo sidoo kale inay hubiso inaadan wax badan ku bixin ama ay lacag kaa dhamaato intaadan dhamaysan.
Ugu dambeyntiina, hubi inaad fahantay waxa amarkaagu soo kordhin doono iyo waxa lagugu eedeeyay. Ma u baahan tahay dhammaan waxyaabaha ku yaal warqadda oo dhan ama qayb gaar ah oo ka mid ah? Haddii aad u baahan tahay dhammaan waxyaabaha, hubi inaad haysato lacag kugu filan oo aad ku daboosho qaddarka oo dhan ka hor intaadan bilaabin inaad dalbato. La soco in marka lagu siiyo lacagta, aad haysato illaa waqti cayiman oo aad ku dhammayn karto mashruuca.
Dalbashada warqad cilmi baaris ah oo iib ah maahan inay noqoto mid xanuun badan. Haddii aad waxoogaa cilmi-baaris ah sameyso oo aad ogaato waxaad u baahan tahay, markaa waxaad heli kartaa warqadda cilmi-baarista ee aad u baahan tahay in lagu sameeyo lacag aad u yar.
Haddii aad qorsheyneyso in warqad gaar ah lagaa sameeyo, hubi inaad si sax ah u ogtahay waxaad rabto. Waxaa jira adeegyo la heli karo oo kaa caawin kara inaad hubiso inaad hesho waxa aad u baahan tahay.
Waraaqaha cilmi baarista waa hab fiican oo lagu helo waxbarasho wanaagsan oo ku saabsan mowduuc gaar ah. Haddii aad ku cusub tahay aag, markaa helitaanka macluumaadka ugu badan ee suurtogalka ah ee ku saabsan mawduucaas ayaa kaa caawin doona. Markaad ka shaqeyneyso warqad, waxaa jira mowduucyo badan oo kala duwan oo aad eegi karto, sidaa darteed waxaad ka heli kartaa midka ku xiisaynaya. iyo inaad dareentid cilmi baaris badan.
Guud ahaan, waraaqaha cilmi baarista waa kuwo aad u awoodi kara in la helo. Haddii aad sameyso cilmi baaris, waxaad awoodi doontaa inaad iibsato waraaqda cilmi baarista adigu adigoon lacag badan ku bixin.